Bhazi Mhepo Inodzora yeCustom Decker Bhazi fekitori uye vagadziri | SONGZ
Tichipindura kudana kwenyika kubva muna 2014 kusvika parizvino, China yaitawo zvimwe zvitsva pachigadziko chemhepo chakasimudza kumashure panguva yekutanga, yakashandisa tekinoroji yemagetsi yemhepo inonzwisisika zvakanyanya kune yedu yekumusoro-yakadzora mweya, uye yakagadzira akasiyana akasiyana masisitimu Zvigadzirwa kusangana nezvinodiwa mumusika.
SZB Series, ye 10-12m mbiri decker bhazi
Unyanzvi Hwakananga hweDecker Decker Bhazi A / C SZB Series:
Compressor Kurema (isina Clutch)
Makirogiramu makumi mana
Kuwedzera Valve Model
Roof Unit Kurema
1. Iyo firiji iri R134a.
2. Iyo air-conditioning unit yakazara yakaiswa pamusoro peinjini yekumashure, uye inofanirwa kutariswa kuti yekumisikidza ifosheswe mukati seyakazara, uye kufosherwa kunze kwekugadzirisa. Nzira yemhepo yekubatana kwekuchinja pakati peyuniti uye dhizaini yemhepo mumota inofanirwa kuiswa nyore.
3. Inofanirwa kuve nechokwadi chekuti inodzikisira feni mhepo inopinda uye inopedza mhepo mushe, uye kuti iyo yekudyira uye yekudzimisa mweya inobviswa zvakanaka pasina mhepo uye pfupi dunhu. Kufamba kwemhepo padivi remotokari kunofanirwa kuve≤5m / s.
4. Iyo pombi yemhepo yekubatanidza kweshanduko kubva kumhepo yekumisikidza yuniti kuenda kunzira yemhepo mubhazi ine chimiro chakasarudzika, saka dhizaini inofanirwa kunyatso tarisa kushanda kweiyo yekumisikidza uye kudzikisira kushorwa kwemukoto wemhepo. Yekumhanyisa kwemhepo yekuchinja dhizaini inofanira kuve≤12m / s.
5. Kumhanyisa kwemhepo kwenzira huru yekupa mweya mukombi kunofanirwa kuve ≤8m / s.
6. Zviri nani kumisikidza grille yekudzosa mweya zvakasiyana zvichienderana nehoriyamu yemhepo yepasi neyepamusoro pasi. Kana iyo inogona kumisikidzwa zvakasiyana kune iyo yepamusoro yepamusoro, uye iyo yepasi pasi inodzorera mweya kuburikidza nematanho.
Yakatsanangurwa Yehunyanzvi Kuzivisa kweSZB Series Bhazi Mhepo Inodzora
1. Adopt advanced condenser condens mvura kupisa yekudzoresa tekinoroji kuti kuderedze yakanyanya kumanikidza kweiyo firiji system uye nekuvandudza simba rekuita simba rechigadzirwa.
2. Chimiro chefuremu chidiki muhukuru uye huremu huremu.
3.Kusimudzira kwakasarudzika, modular dhizaini, nekukurumidza kupindura kumusika mutengi zvinodiwa.
4. Kune mhando dzakawanda dzezvigadzirwa, dzinogona kuvhara 10-12 metres yakapetwa kaviri uye imwe nehafu bhazi.
5. Iyo evaporative mweya vhoriyamu inogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa zvekushandisa kuverengera yunifomu mweya kubuda.
Nyaya Dzokushandisa dzeDhivha Decker Bhazi Mhepo Inodzora SZB Series:
Pashure: Economy Mhepo Inodzora yeBhazi, Murairidzi, Bhazi reChikoro uye Bhizinesi rakataurwa
Zvadaro: Kuchenesa Mhepo uye Disinfection System